I-Limani cottage Steni Vala - I-Airbnb
I-Limani cottage Steni Vala
Steni Vala, Thessalia Sterea Ellada, i-Greece
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Christos
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Christos izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Indlu enhle yamaGreki yendabuko , yangasese , enokubukwa okumangalisayo phezu kwetheku eSteni Vala . I-balcony enkulu eya emnyango wangaphambili yokudlela nokuphumula.Izingadi eceleni nangemuva. Leli kotishi elinamakamelo angu-2 , lingalala imibhede emi-4 kwemithathu futhi izingane ezincane ezi-2 zingahlaliswa emibhedeni yesitayela sikasofa endaweni yokuhlala.Ipulani elivulekile lekhishi lendawo yokuhlala lilingana kahle namagumbi okulala kanye negumbi lokugezela eliphuma endaweni. Itheku liwuhambo lwemizuzu ukuya esitolo esikhulu, indawo yokudlela, i-café s.
Indlwana ebukekayo yamaGreki eyingqayizivele enemibono emangalisayo. Ihlomele kahle imindeni noma imibhangqwana. Indawo enhle , isevisi yebhasi isebenza kusukela ngoJuni kuya kuSeptemba ukuya edolobhaneni elidala kanye nedolobha elikhulu lechweba.Konke okudingayo kusesitebhisini somnyango . Amabhishi angu-3 angaphansi kwemizuzu eyi-10 yokuhamba futhi eliseduze liyi-150 m kuphela ukusuka . Isitolo esikhulu esigcwele Amaminithi uhamba ngezinyawo.
I-Steni Vala iyichweba elincane lokudoba elimaphakathi nesiqhingi. Yindawo edume kakhulu ezinyangeni zasehlobo eziphakeme futhi efunwa kakhulu.Okungenani kunezindawo zokudlela eziyisithupha kanye nezindawo zokudlela ezithile, izitolo ezinkulu ezimbili kanye nesikole se-scub konke okuzinze kuleli chweba elincane.Ukushayela okungu-15 kuphela ukuya edolobheni elidala kanye nechweba eliyinhloko kanye neziqhingi eziningi ezinamabhishi amahle.Ilanga liphuma ngapha kwesiqhingi ukuze izinyoni zakuqala zibone ukuqala kolunye usuku olusha .
Ithimba lezokuvakasha le-Alonissos likhona 24/7 futhi kusele ucingo kuphela. Ilungu lethimba lethu lizohlangana nawe likubonise indlela eya endlini encane futhi liphendule yonke imibuzo ongase ube nayo .Iholide lakho liyinjabulo yethu futhi sithemba ukukwamukela maduze endlini encane yaseLimani.
Ithimba lezokuvakasha le-Alonissos likhona 24/7 futhi kusele ucingo kuphela. Ilungu lethimba lethu lizohlangana nawe likubonise indlela eya endlini encane futhi liphendule yonke im…
Inombolo yepholisi: 00001319538
Hlola ezinye izinketho ezise- Steni Vala namaphethelo